10 Sep 2018 . 8:02 PM
ခုတလော လူတိုင်း တကူးတကလာဝယ်စားနေကြတဲ့ ဆယ်လီရေခဲချောင်း စားဖူးပြီလား?
၁၅၀၀၊ ၂၀၀၀ ပေးရုံနဲ့ ရန်ကုန်က စားဖူးသမျှရေခဲချောင်းတွေထဲ အရသာအရှိဆုံးဆိုရမယ့် Tu Tu ရေခဲချောင်း မစားဖူးသေးရင်တော့ ခေတ်နောက်ကျပြီပဲ။
ဒီရေခဲချောင်းကောင်းချက်က စားပြီးတာနဲ့ ကျန်တဲ့ရေခဲချောင်းအရသာတွေ မေ့သွားလောက်တဲ့ထိပဲ။ စားဖူးသူတိုင်း ထပ်မစားရမနေနိုင်ဘူးလို့တောင်ကြားတယ်။
Tu Tu တဲ့။ တကယ့်အသီးအစစ်တွေ၊ ဒိန်ချဉ်အဆီအနှစ်တွေနဲ့ ပျစ်နှစ်နေအောင် လုပ်ထားတဲ့ သဘာဝ သစ်သီးရေခဲချောင်းလေးတွေ။ ဒါပေမယ့် ရိုးရိုးရေခဲချောင်းတွေနဲ့ မတူတာက ကလေးတွေတင်မက၊ လူကြီးတွေပါ ကြိုက်ကြတဲ့ထိ ကောင်းသဗျား။
အရောင်တွေမပါဘူး။ ဆေးသကြားဘာညာ အန္တရာယ်ဖြစ်တာမပါဘူး။ သူ့ရေခဲချောင်း တစ်ချောင်းစားလိုက်ပြီးရင် နောက်တစ်ချောင်းကရော ဘယ်လိုအရသာ၊ ဘယ်လောက်ကောင်းမှာပါလိမ့်လို့ စားပြီးရင်း စားချင်ဖြစ်ရတဲ့ ရေခဲချောင်းပါပဲဗျာတို့ရေ။
Tu Tu အကြောင်းပြောပြရရင် သူက မန္တလေးက လာတာတဲ့။ ဒီရန်ကုန်မှာ တလောတုန်းကပေါ်တဲ့ Taiwan သစ်သီးရေခဲချောင်းလိုမျိုး ဒါပေမယ့် Tu Tu က မန္တလေးမှာလုပ်ပြီး မန္တလေးမှာတစ်ဆိုင်ရယ်၊ တာမွေက တစ်ဆိုင်တည်းမှာပဲရောင်းတာတဲ့။
သူ့ရေခဲချောင်းက ဓါတုဗေဒတွေမပါတာရယ်၊ အရသာက လတ်ဆတ်ပြီး စားလို့သိပ်ကောင်းတာရယ်၊ တကယ့်အသီးတွေထည့်ကြိတ်ထားလို့ ဝါးလိုက်တိုင်း အသီးဖတ်လေးတွေပါဝါးမိတာကြောင့်နာမည်ကြီးနေတာပါ။
အရသာ ပြောရရင် ၁၃ မျိုးတောင်ရှိတယ်။
နာနတ်၊ ဒူးရင်း၊ ပင်မှည့်၊ သီးစုံ၊ စတော်ဘယ်ရီဒိန်ချဉ်၊ရိုးရိုးဒိန်ချဉ်၊ စပျစ်၊ ကီဝီ၊ နှမ်းမဲကောက်ညှင်း၊ ပဲနဲ့ green tea၊ လိမ္မော်ခွံနဲ့ ဝတ်မှုန်ရောလုပ်တဲ့ အပြာရောင်လေး၊ ဝါးပြာနဲ့လုပ်တဲ့ အမဲရောင်လေး၊ ချောကလက်၊ သရက်၊ ထောပတ် တော်တော်အစုံအလင်ပဲ။
ချောကလက်ရယ်၊ ဝါးပြာနဲ့လုပ်တဲ့အမဲလေးရယ်၊ ဝတ်မှုန်နဲ့လုပ်တဲ့ အပြာလေးရယ်က တစ်ချောင်း ၂၀၀၀ ပေးရတယ်။ ကျန်တဲ့အသီးတွေ ဒိန်ချဉ်ရေခဲချောင်းတွေက ၁၅၀၀ တဲ့။
ဆိုင်မှာနာမည်ကြီးတာက စတော်ဘယ်ရီဒိန်ချဉ်ရယ်၊ မက္ကဆီကိုထောပတ်သီးရယ်၊ သီးစုံရယ်၊ ဒူးရင်းကတော့အစားများတယ်တဲ့။
စတော်ဘယ်ရီဒိန်ချဉ်ဆို တကယ့်ဒိန်ချဉ်ကိုမလိုင်ဖတ်တွေရယ်၊ အသီးအစစ်တွေနဲ့ကြိတ်ထားတာ ကိုယ်က ချောင်းဆိုးနေတဲ့ကြားက စားချင်လွန်းလို့စားမိတာတောင် တချောင်းကုန်တယ်ချောင်းမဆိုးဘူး။ ရင်မကြပ်ဘူး။ မအီသွားဘူး။ လည်ချောင်းထဲ မချွဲကျန်နေခဲ့ဘူး။ ချဉ်ချဉ်လေးနဲ့ ကောင်းလိုက်တာဆိုတာ။
ချောကလက်ကတော့ ချောကလက်အစစ်တုံးကြီးကို အရည်ကြိုပြီး အအေးခံထားသလိုပဲ။ ခါးသက်ပြီး မွှေးနေတာပဲ။ ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်အခဲကြီး။
မက္ကဆီကိုထောပတ်ကတော့သူ့ကိုစားပြီးရင် တော်ရုံထောပတ်သီးရေခဲချောင်းတွေမစားချင်တော့လောက်အောင် မိုက်တယ်။ အသီးအစစ်လေးနဲ့ စိမ့်ပြီးမွှေးနေရော။
ဈေးက သာမန်ရေခဲချောင်းတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ဈေးများသလိုထင်ရတယ်နော်။ ဒါပေမယ့် တကယ်စားကြည့်မှ တန်လွန်းလို့ ထပ်ထပ်စားချင်စိတ်တောင် ပေါက်တယ် အဟုတ်။ ၁၅၀၀ ဆိုတာ မဆိုးဘူးပြောရမယ်။
ရေခဲချောင်းကိုက်ရတာ အဆင်ပြေအောင်လည်း စက္ကူပတ်လေးတွေ ခံပေးထားတော့ စားရတာ ချစ်စရာနဲ့ အထာလည်းကျတယ်။ ကိုယ်တောင် ၃ချောင်းစား ၃ချောင်းစွဲမိသကွယ်။
နာမည်ကြီးချက်ကတော့ Beauty Blogger နေခြည်ဦးတောင် စားပြီး ကြိုက်သွားလို့ My Day မှာတင်ထားသေးတယ်။ ဒီလောက်ဆို ဘယ်လောက်အားပေးကြမ်းလဲသိလိုက်တော့။
ဆိုင်လေးက တာမွေ ၁၆၅လမ်း။ အမှတ် ၃၆ မြေညီထပ်က Cover Palace ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲ ရတာ။ မန္တလေးကနေ သယ်သယ်လာတယ်ပြောတယ်။ မနက် ၁၀ နာရီကနေ ည ၈ နာရီထိရတယ်တဲ့။
ကဲ…ရေခဲချောင်းချစ်သူတွေ တာမွေရောက်ရင် Tu Tu ဆီတခါလောက်မစားမဖြစ် သွားစားကြည့်ရင် အခရာက ညွှန်တာ မလွန်မှန်းသိလိမ့်မယ်။ သွားစားကြည့်ဦးနော်။
အရသာရှိလှနျးလို့ နာမညျကွီးနတေဲ့ တာမှကေ Tu Tu ဆယျလီသဈသီးရခေဲခြောငျး
ခုတလော လူတိုငျး တကူးတကလာဝယျစားနကွေတဲ့ ဆယျလီရခေဲခြောငျး စားဖူးပွီလား?
၁၅၀၀၊ ၂၀၀၀ ပေးရုံနဲ့ ရနျကုနျက စားဖူးသမြှရခေဲခြောငျးတှထေဲ အရသာအရှိဆုံးဆိုရမယျ့ Tu Tu ရခေဲခြောငျး မစားဖူးသေးရငျတော့ ခတျေနောကျကပြွီပဲ။
ဒီရခေဲခြောငျးကောငျးခကျြက စားပွီးတာနဲ့ ကနျြတဲ့ရခေဲခြောငျးအရသာတှေ မသှေ့ားလောကျတဲ့ထိပဲ။ စားဖူးသူတိုငျး ထပျမစားရမနနေိုငျဘူးလို့တောငျကွားတယျ။
Tu Tu တဲ့။ တကယျ့အသီးအစဈတှေ၊ ဒိနျခဉျြအဆီအနှဈတှနေဲ့ ပဈြနှဈနအေောငျ လုပျထားတဲ့ သဘာဝ သဈသီးရခေဲခြောငျးလေးတှေ။ ဒါပမေယျ့ ရိုးရိုးရခေဲခြောငျးတှနေဲ့ မတူတာက ကလေးတှတေငျမက၊ လူကွီးတှပေါ ကွိုကျကွတဲ့ထိ ကောငျးသဗြား။
အရောငျတှမေပါဘူး။ ဆေးသကွားဘာညာ အန်တရာယျဖွဈတာမပါဘူး။ သူ့ရခေဲခြောငျး တဈခြောငျးစားလိုကျပွီးရငျ နောကျတဈခြောငျးကရော ဘယျလိုအရသာ၊ ဘယျလောကျကောငျးမှာပါလိမျ့လို့ စားပွီးရငျး စားခငျြဖွဈရတဲ့ ရခေဲခြောငျးပါပဲဗြာတို့ရေ။
Tu Tu အကွောငျးပွောပွရရငျ သူက မန်တလေးက လာတာတဲ့။ ဒီရနျကုနျမှာ တလောတုနျးကပျေါတဲ့ Taiwan သဈသီးရခေဲခြောငျးလိုမြိုး ဒါပမေယျ့ Tu Tu က မန်တလေးမှာလုပျပွီး မန်တလေးမှာတဈဆိုငျရယျ၊ တာမှကေ တဈဆိုငျတညျးမှာပဲရောငျးတာတဲ့။
သူ့ရခေဲခြောငျးက ဓါတုဗဒေတှမေပါတာရယျ၊ အရသာက လတျဆတျပွီး စားလို့သိပျကောငျးတာရယျ၊ တကယျ့အသီးတှထေညျ့ကွိတျထားလို့ ဝါးလိုကျတိုငျး အသီးဖတျလေးတှပေါဝါးမိတာကွောငျ့နာမညျကွီးနတောပါ
အရသာ ပွောရရငျ ၁၃ မြိုးတောငျရှိတယျ။
နာနတျ၊ ဒူးရငျး၊ ပငျမှညျ့၊ သီးစုံ၊ စတျောဘယျရီဒိနျခဉျြ၊ရိုးရိုးဒိနျခဉျြ၊ စပဈြ၊ ကီဝီ၊ နှမျးမဲကောကျညှငျး၊ ပဲနဲ့ green tea၊ လိမ်မျောခှံနဲ့ ဝတျမှုနျရောလုပျတဲ့ အပွာရောငျလေး၊ ဝါးပွာနဲ့လုပျတဲ့ အမဲရောငျလေး၊ ခြောကလကျ၊ သရကျ၊ ထောပတျ တျောတျောအစုံအလငျပဲ။
ခြောကလကျရယျ၊ ဝါးပွာနဲ့လုပျတဲ့အမဲလေးရယျ၊ ဝတျမှုနျနဲ့လုပျတဲ့ အပွာလေးရယျက တဈခြောငျး ၂၀၀၀ ပေးရတယျ။ ကနျြတဲ့အသီးတှေ ဒိနျခဉျြရခေဲခြောငျးတှကေ ၁၅၀၀ တဲ့။
ဆိုငျမှာနာမညျကွီးတာက စတျောဘယျရီဒိနျခဉျြရယျ၊ မက်ကဆီကိုထောပတျသီးရယျ၊ သီးစုံရယျ၊ ဒူးရငျးကတော့အစားမြားတယျတဲ့။
စတျောဘယျရီဒိနျခဉျြဆို တကယျ့ဒိနျခဉျြကိုမလိုငျဖတျတှရေယျ၊ အသီးအစဈတှနေဲ့ကွိတျထားတာ ကိုယျက ခြောငျးဆိုးနတေဲ့ကွားက စားခငျြလှနျးလို့စားမိတာတောငျ တခြောငျးကုနျတယျခြောငျးမဆိုးဘူး။ ရငျမကွပျဘူး။ မအီသှားဘူး။ လညျခြောငျးထဲ မခြှဲကနျြနခေဲ့ဘူး။ ခဉျြခဉျြလေးနဲ့ ကောငျးလိုကျတာဆိုတာ။
ခြောကလကျကတော့ ခြောကလကျအစဈတုံးကွီးကို အရညျကွိုပွီး အအေးခံထားသလိုပဲ။ ခါးသကျပွီး မှေးနတောပဲ။ ပဈြပဈြနှဈနှဈအခဲကွီး။
မက်ကဆီကိုထောပတျကတော့သူ့ကိုစားပွီးရငျ တျောရုံထောပတျသီးရခေဲခြောငျးတှမေစားခငျြတော့လောကျအောငျ မိုကျတယျ။ အသီးအစဈလေးနဲ့ စိမျ့ပွီးမှေးနရေော။
ဈေးက သာမနျရခေဲခြောငျးတှနေဲ့ ယှဉျရငျ ဈေးမြားသလိုထငျရတယျနျော။ ဒါပမေယျ့ တကယျစားကွညျ့မှ တနျလှနျးလို့ ထပျထပျစားခငျြစိတျတောငျ ပေါကျတယျ အဟုတျ။ ၁၅၀၀ ဆိုတာ မဆိုးဘူးပွောရမယျ။
ရခေဲခြောငျးကိုကျရတာ အဆငျပွအေောငျလညျး စက်ကူပတျလေးတှေ ခံပေးထားတော့ စားရတာ ခဈြစရာနဲ့ အထာလညျးကတြယျ။ ကိုယျတောငျ ၃ခြောငျးစား ၃ခြောငျးစှဲမိသကှယျ။
နာမညျကွီးခကျြကတော့ Beauty Blogger နခွေညျဦးတောငျ စားပွီး ကွိုကျသှားလို့ My Day မှာတငျထားသေးတယျ။ ဒီလောကျဆို ဘယျလောကျအားပေးကွမျးလဲသိလိုကျတော့။
ဆိုငျလေးက တာမှေ ၁၆၅လမျး။ အမှတျ ၃၆ မွညေီထပျက Cover Palace ဆိုတဲ့ဆိုငျလေးမှာပဲ ရတာ။ မန်တလေးကနေ သယျသယျလာတယျပွောတယျ။ မနကျ ၁၀ နာရီကနေ ည ၈ နာရီထိရတယျတဲ့။
ကဲ…ရခေဲခြောငျးခဈြသူတှေ တာမှရေောကျရငျ Tu Tu ဆီတခါလောကျမစားမဖွဈ သှားစားကွညျ့ရငျ အခရာက ညှနျတာ မလှနျမှနျးသိလိမျ့မယျ။ သှားစားကွညျ့ဦးနျော။